Vokatry ny fiakaran’ny tosidra: 40%-n’ny vohoka, misy fahasarotany | NewsMada
Vokatry ny fiakaran’ny tosidra: 40%-n’ny vohoka, misy fahasarotany
40%-n’ny vohoka, misy fahasarotana avokoa, araka ny zava-misy hita eny amin’ny tobim-pahasalamana na hopitaly, amin’izao fotoana izao, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitry ny sampana fikarakarana ny vehivavy (gynécologie) sy ny fiterahana eny amin’ny Cenhosoa, ny dokotera Randriamahavonjy Romuald, omaly teny Anosy. Mandritra ny fitondrana vohoka, mety hanana olana amin’ny fahasalamana ilay reny na koa ny zaza ao am-bohoka. Mety hitarika amin’ny fahafatesan’ny reny na koa ho an’ny zaza io olana io raha tsy voaray an-tanana haingana. Eo koa ny fahaterahana tsy tonga volana sy ny tsy fahazoana zaza intsony ho an’ny vehivavy itrangan’ny tsy fahasalamana mandritra ny vohoka. Olana amin’ny fahasalamana voalohany ho an’ny vehivavy mitondra vohoka ny fiakaran’ny tosidra . Mila fantarina ny antony miteraka ny fiakaran’ny tosidra hitondrana ny fitsaboana mifanaraka. Fisorohana mety indrindra ny manatona mpitsabo manokana mialoha ny hametrahana zaza hamantarana ny toe-pahasalaman’ilay vehivavy.
Olana faharoa miseho amin’ny vehivavy mitondra vohoka ny fisian’ny mikraoba ao amin’ny taovam-pananahany. Tranga aterak’izany ny fahafahan-jaza na lasa miteraka zaza sampona. Antony nisafidinan’ny fikambanan’ny mpitsabo manokana ny vehivavy sy ny fitondrana vohoka (Comago) ny lohahevitra vohoka misy fahasarotana ny fahatsapana fa betsaka ny vehivavy manana olana amin’ny fahasalamana mandritra ny vohoka ka ilana fandraisana an-tanana.
Misy antoka ny miteraka eny amin’ny tobim-pahasalamana
“Amin’izao fotoana izao koa, mbola betsaka ny tranga tsy tokony hiseho intsony nefa hita ihany amin’ny vehivavy mitondra vohoka. Ohatra amin’ireny ny tranon-jaza mitriatra ka miteraka fahaverezan-dra eo amin’ny vehivavy, ny reny efa nodidina teo aloha tranon-jaza nefa tsy manatona toeram-pitsaboana misy trano fandidiana rehefa hiteraka manaraka”, hoy ny filohan’ny Comago, ny profesora Andrianampanalinarivo Rakotovao Hery. Mila entanina ny vehivavy mitondra vohoka, indrindra ireo ahitana olana amin’ny fahasalamana fa misy antoka kokoa ny miteraka eny amin’ny tobim-pahasalamana miaraka amin’ny mpitsabo.
70 ny mpitsabo manokana ny vehivavy ary mifampizara traikefa sy fahalalana izy ireo mandritra ny roa andro eny Anosy. Ao anatin’ny hetsika fanamarihana ny Andro faha-11 ho an’ny Comago ny famelabelarana amin’ny lohahevitra 42.